नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा, कारण बने केपी ओली ! – GALAXY
नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा, कारण बने केपी ओली !
काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नक्कल गर्न खोज्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पद नै धरापमा परेको छ । ओलीको सिको गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भाइरल भएका हुन् । कोरोनाविरुद्धको खोप प्रमाणपत्रमा आफ्नो तस्वीर राखेपछि उनी भाइरल भएका हुन् ।
उनको यो कदमका विरुद्धमा केरला हाइकोर्टमा मुद्धा परेको छ । यो विषयमा परेको मुद्दाबारे आगामी साता केरला हाइकोर्टमा सुनुवाइ हुने छ । पीटर नामका एक व्यक्तिले खोप प्रमाणपत्रमा मोदीको तस्वीर राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्दा पोलपोलमा उनको फोटोसहितको विज्ञापन छापिएको थियो । नेपालमा त्यसको विरोध भएको भएपनि अदालती प्रक्रियामा भने कोही पनि गएको थिएन् ।
मोदीको तस्वीर नभएको खोप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन माग गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मोदीको तस्वीर अंकित खोप प्रमाणपत्रले आफ्नो मौलिक अधिकारको हनन् भयो ।’ मोदीविरुद्ध रिद दायर गर्ने ६२ वर्षीय पिटर भारतीय विपक्षी दल कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् ।
‘मेरो खोप प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो राखेर मोदीले नागरिकको निजी मामिलामा चोट पु¥याएका छन् । यो कार्य असंवैधानिक हो,’ कोट्टायमका उनले बीबीसीसँग भने, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो लाजमर्दो हर्कत तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।’
‘लोकतन्त्रमा यस्तो कार्य एकदमै अनुचित छ । राष्ट्र अर्थात व्यक्तिका लागि यस्तो प्रयोगको कुनै अर्थ छैन ।’
गत अगस्टमा संसदमा बोल्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भारती प्रवीण पवारले ‘ठूलो सार्वजनिक हित’का लागि प्रमाणपत्रमा प्रधानमन्त्रीको तस्वीर राखिएको बताएकी थिइन् । खोप लगाएपछि पनि कोरोनाबाट बच्नका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड पालनामा प्रेरित गर्न प्रमाणपत्रमा मोदीको तस्वीर राखिएको उनको तर्क थियो ।
तर पिटरको तर्क छ, खोप लगाइसकेका व्यक्ति कोरोनाबाट बच्ने मापदण्ड पालनामा गर्ने व्यवहारबारे जानकार छन् । प्रमाणपत्रमा लेखिएको सन्देश उपदेश दिने बाहेक अरु खास केही छैन । पिटर भन्छन्, ‘मोदी न त हाम्रो पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् न त खोप कार्यक्रम भारतमा पहिलो हो । तर कोभिड–१९ खोप अभियानलाई यस्तो देखाउन खोजिएको छ कि यो एक व्यक्तिको कार्यक्रम हो । जुन कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको प्रपोगाण्डा टुल हो ।’
सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क खोप लगाउन मानिसको लामो लाइन लाग्ने गरेका कारण आफूले निजी अस्पतालबाट खोप लगाएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैलै प्रति डोजको ७५० रुपैयाँ तिरेको छु । त्यसैले मेरो प्रमाणपत्रमा मोदीको तस्वीर किन रु’
केरला हाइकोर्टले केन्द्र र राज्य सरकारलाई यसबारे जवाफ दिनका लागि दुई हप्ताको समय दिएको छ । पिटरको रिटबारे भारतीय जनता पार्टीका दुई प्रवक्तासँग प्रतिक्रिया लिन खोजेपनि कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन नमानेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
खोप प्रमाणपत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीको तस्वीर राखिएकोमा केही राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । विपक्षी दलले नेतृत्व गरेका केही राज्यहरुमा मोदीको फोटो हटाएर आफ्नो मुख्यमन्त्रीको तस्वीर प्रमाणपत्रमा राखेका छन् । कांग्रेस नेतृ प्रियंका गान्धी वाड्राले खोप प्रमाणपत्रमा आफ्नो तस्वीर राखेर मोदीले व्यक्तिगत प्रचार गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले नागरिकको मृत्यु प्रमाणपत्रमा पनि मोदीले आफ्नो तस्वीर राख्न आग्रह गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘कोभिड प्रमाणपत्रमा मोदीले आफ्नो तस्वीर अनिवार्य गरेका छन् । अब मृत्यु प्रमाणपत्रमा पनि यस्तै गरे हुन्छ ।’
उनले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न गरेकी छन्, ‘मानौं म तपाईंको समर्थक होइन, मलाई तपाईं मन पर्दैन । तर पनि मैले यो राख्नु उचित हुन्छ रु नागरिकको स्वतन्त्रता कहाँ छ ?’ खोप प्रमाणपत्रमा अंकित यही तस्वीरका कारण वैदेशिक यात्रा गरिरहेका केही भारतीय यात्रुहरुलाई समस्या पनि भएको थियो । भाइस न्यूजको एक रिपोर्ट अनुसार प्रमाणपत्रमा अंकित मोदीको तस्वीरका कारण एक इमिग्रेसन अधिकारीले केही यात्रुलाई जालसाजीको आरोप लगाएका थिए ।
पिटर चिन्ता व्यक्त गर्छन्, ‘मोदीको मनोमानीलाई यसैगरी छाड्ने हो भने आगामी दिनमा हाम्रो छोराछोरीको स्कुल र कलेजको लिभिङ प्रमाणपत्रमा मोदीले आफ्नो तस्वीर राख्नेछन् ।’ हालै सुप्रिम कोर्टले आपत्ति जनाएपछि कोर्टको एक आधिकारिक इमेलमार्फत मोदीको तस्वीर अंकित सरकारी विज्ञापन हटाउने भनेको छ । तर प्रधानमन्त्री मोदीका समर्थकले खोप प्रमाणपत्रमा प्रधानमन्त्रीको तस्वीर राख्नु कुनै गलत नभएको बताएका छन् ।
देशमा सर्वाधिक लोकप्रिय अनुहारलाई प्रमाणपत्रमा राख्ने उचित नभएको समर्थकहरुको तर्क छ । सडकका हरेक गल्लीमा राखिएको होडिङ बोर्डमा मोदी मुस्कुराइरहेको तस्वीर देख्न सकिन्छ । हरेक मन्त्रालयको विज्ञापनमा र वेबसाइटमा पनि उनको तस्वीर छ । पत्रपत्रिकामा छापिने मन्त्रालयको विज्ञापनमा पनि मोदीको तस्वीर देख्न सकिन्छ ।
मोदी जस्तो आफ्नो प्रशंसा आफैं गर्ने नेता अहिलेसम्म भारतमा नरहेको भन्दै आलोचकहरुले उनको आलोचना गरेका छन् । बीजेपीले गान्धी–नेहरु खानदानको नामबाट एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, पुरस्कार तथा कल्याणकारी आयोजनाको नामाकरण गरेको भन्दै कांग्रेस पार्टीको आलोचना गर्दै आइरहेको छ ।
उत्तर प्रदेशकी मुख्यमन्त्री मायावतीले आफ्नो मूर्ति बनाएकोमा उनको ठूलो आलोचना भएको थियो । तामिलनाडुकी पूर्वमुख्यमन्त्री जे जयललिताले खानाको सस्तो क्यान्टिन, औषधि एवं नुनको प्याकेटमा आफ्नो तस्वीर प्रयोग गरेका थिए ।
मोदीको जीवनी लेख्ने पत्रकार नीलाजन मुखोपाध्याय भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदीको आत्म प्रशंसा गर्ने यो परिपाटीले बेग्लै स्तरमा पु¥याएको छ ।’ प्रधानमन्त्री मोदीले महामारीको समयमा आफ्नो प्रचार गर्ने एक ठूलो अवसरको रुपमा प्रयोग गरेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोरोनाको सुरक्षाका लागि एक मात्र उपाय भनेको खोप हो । मोदीले खोप प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो राखेर आफू नै कोरोनाको रक्षक भएको देखाउन चाहन्छन् ।’
मुखोपाध्याय अगाडि थप्छन्, ‘भगवानको मानवीय रुपमा आफू स्वयंलाई देखाएर नागरिकको भरोसा हासिल गर्न चाहन्छन् र आफ्नो लागि भोटको रुपमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छन् ।’ इमेज गुरु दीलित चेरियनका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले खोप प्रमाणपत्रमा आफ्नो तस्वीर राखेर आफूलाई राम्रो देखाउन खोजेका हुन् । र, खोप कार्डलाई भोट हासिल गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘यो चुनावी फाइदाका लागि हुनसक्छ । यसैगरी अन्य साधनले पनि काम गरिरहेको छ, जसरी खोप प्रमाणपत्रबाहेक अन्य सरकारी योजनाको दस्तावेज लगायत सबैले एउटै सन्देश दिइरहेको छ ।’ पछिल्लो समय पार्टीको पहिचान पनि व्यक्तिसँग जोडिएकोले ‘तस्वीरको पहिचान’ले ठूलो भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन् ।